Ambatovy soutient l'UNICEF dans le traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë dans le Sud
L’entreprise Ambatovy contribue à la réponse humanitaire dans le sud par une donation de US$ 100,000 à l’UNICEF pour l’achat Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE communément appelé Plumpy Nut®).
Toa tsy mifanojo mihitsy ny mahamay ny vahoaka sy ny ataon’ny mpitondra
Mandinika hatrany ny fihetsiky ny mpitondra ny vahoaka na dia tsy afa-manoatra aza raha ny resaka re eny anivon’ny fiarahamonina eny. Notarafina tamin’ny zava-misy faran’ny herinandro teo nidirana indray tamin’ny hamehana ara-pahasalamana ka nampiakarana ny Praiminisitra Ntsay Christian hanazava tamin’ny vahoaka ny toe-draharaha mahamaika ny fanjakana.
Harena ankibon’ny tany any Ambositra
Iharan’ny tsindry ny tompon’ny tany fitrandrahana Amazonita ao Andina!
Faritra iray isany manana harena ankibon’ny tany toy ny vatosoa iny Amoron’i Mania iny. Kaominina iray misy fitrandrahana izany ao Andina. Miantso vonjy anefa ny mponina any an-toerana noho ny tsindry ataon’ny mpandraharaha.
Ireo fepetra nambaran’ny Praiministra ho an'ny 15 andro manaraka
Indro ny famintinana ny fepetra nambaran’ny Praiministra nandritra ny fotoana nivahinianany tao amin’ny televiziona Malagasy ny alahady 16 mey teo. Tsy nasiana famakafakana fa antolotra araka ny nandefasan’ny mpikirakira vaovao eo anvion’ny Primatiora azy izany sy nanapartiahany azy teo amin’ny tambazotra sosialy. Iarahana mahita araka izao famintinana izao inona avy ny laharam-pahamehana ho an’ny fitondrana,
Hadino ny vahoaka, ny seho ivelany hatrany no misongadina
Rahary il y a 9 mois
Hevitra samihafa no ifampitafan’ny olona momba ny zava-misy eto amin’ny firenena amin’ny ady atao amin’ity valanaretina ‘coronavirus’ ity hatramin’izay nampiharana ny hamehana ara-pahasalamana izay. Tsy ahitan’izy ireny mazava ny amin’ny hiarenan’ny fiainany satria toy ny vahoaka tsy misy mpiahy izy ireo. Zava-misy.